Ikati elimpunga | Amakati kaNoti
Amakati ayimfihlakalo kakhulu. Ezinye izilwane ezithandekayo, yize kwesinye isikhathi zihlubuka kancane. Bathandwa yizigidi zabantu emhlabeni wonke, futhi abaningi bahlala nomndeni wesintu. Kunemibala eminingi: omhlophe, omnyama, owolintshi, i-bicolor, i-tricolor, ... futhi mpunga.
Ikati elimpunga liyisilwane esidonsela ukunaka okwengeziwe. Isizathu? Akucaci, kepha iqinisekile ukuthi inejazi elinombala omnyama elizokwenza amehlo abo, noma aphuzi noma aluhlaza, agqame. Umphumela ukubukeka okumangazayo okushaya inhliziyo yakho kahle.
1 Ikati elimpunga liyazala
1.3 Oluhlaza okwesibhakabhaka waseRussia
1.5 I-Mau yaseGibhithe
1.6 Izinwele ezimfishane zaseMpumalanga
1.7 I-European Common
2 Ngilibeke liphi igama?
2.1 Amagama amakati ampunga
2.2 Amagama amakati ampunga
Ikati elimpunga liyazala
Kunezinhlobo eziningana zamakati ompunga, futhi yi-Angora, iPersian, iRussian Blue, iCarthusian, i-Mau yaseGibhithe, isifinyezo saseMpumalanga kanye ne-European Common. Ake sizibone ngokuhlukana ukuze sizazi kangcono:
Uhlobo lwe-Angora lwaseTurkey lwendabuko, njengoba igama lalo liphakamisa, kusuka eTurkey. Ingenye yakudala, futhi isalokhu isebenza kahle kuze kube namuhla. Kubonakala ngokuba nezinwele ezinde, umzimba wezemidlalo nenhle. Usayizi wazo mkhulu ngokulingene, njengoba zikwazi ukukala cishe u-6kg.
Kuzolile ngokwemvelo, ngakho-ke ilungele imindeni emincane, ngisho nabantu asebekhulile, ngoba uboya bayo bungesinye salezo ongakwazi ukuyeka ukuziphulula, futhi ikati elimpunga le-Angora lidinga ukubhulasha okukodwa noma kabili nsuku zonke.
Uhlobo lwekati lasePheresiya luyisithelo somuntu. Kusukela kwaqala njengohlobo, emuva ngonyaka we-1800, abalimi bazamile ukwenza ubuso buqine ngokwengeziwe, ngaphandle kokulahlekelwa iota yobukhazikhazi bayo. Ngesisindo esingu-7kg, unezinwele ezinde ezinosilika.
AmaPheresiya abelokhu ehlala ezungezwe ngabantu abahloniphekile, okwenza kube elinye lamakati afaneleka kakhulu emindenini ethanda ukujabulela ukuphumula kwabo. Ikati elimpunga lasePheresiya lithanda ukuba kusofa usuku lonkeYize, yebo, kubalulekile ukuthi uvivinye umzimba nsuku zonke ukugwema ukukala amakhilogremu ambalwa.
Oluhlaza okwesibhakabhaka waseRussia
Uhlobo lwaseRussia oluhlaza okwesibhakabhaka luvela eRussia. Inosayizi ophakathi nendawo, enesisindo esingu-5kg, nombala wezinwele omuhle kakhulu: mpunga oluhlaza okwesibhakabhaka. Uboya babo, ngendlela, bungaba bufushane noma bude. Unomzimba onemisipha, onamehlo amakhulu aluhlaza.
Lesi yisilwane ozokujabulela ukuhlala uzungezwe ngabantu obathandayo, njengoba sinothando olukhulu kakhulu. Uzokuthanda ukuchitha isikhathi edlala nezingane kanye / noma nabantu abadala. Futhi, ayidingi ukunakekelwa okukhethekile, ngaphandle kothando oluningi impela 🙂.
Izinhlobo zekati iCarthusian (noma iChartreux) zidabuka eTurkey nase-Iran, yize ngekhulu lama-XNUMX kwaba yinto ejwayelekile eFrance. Futhi ingenye yezinhlobo ezindala kakhulu ezaziwayo. Kubonakala ngokuba ne- izinwele ezimfushane eziluhlaza-mpunga namehlo aluhlaza ezihlukaniswe nezinye izinhlanga. Isisindo sayo singu-7kg.
Umlingiswa wakhe uhlekisa kakhulu futhi uyathandeka. Uyakuthanda ukwenza okubi, kepha futhi nokunika nokwamukela uthando. Eqinisweni, uma iqala ukuhlanza ... kunzima ukuma. Ngendlela, kufanele wazi ukuthi ungumzingeli owazalwa, ngakho-ke kunconywa kakhulu ukuthi udlale naye nsuku zonke ukuze usebenzise umzimba.
Uhlobo lwe-Mau lwaseGibhithe luvela ezweni leNayile, eGibhithe. Yisilwane abaseGibhithe lasendulo ababebagcinela inkampani, naleyo abayidweba emidwebweni yabo esodongeni. Kubonakala ngokuba nejazi elinamabala amnyama kakhulu kusizinda esikhanyayo, yingakho kubhekwa njengekati le-tabby.
Umzimba mude, uphakathi nendawo, unesisindo esingeqile ku-5kg. Ikati le-tabby elimpunga waseGibhithe ezimele kakhulu futhi ehlakaniphile.
Izinwele ezimfishane zaseMpumalanga
Izinhlobo zezinwele ezimfishane zasempumalanga zaqala ukukhuliswa eMelika maphakathi neminyaka yama-70s, yize yayivele ikhona phambilini, eThailand, lapho ivela khona. Ngosayizi ophakathi, isisindo esingu-5,5kg, ine- izinwele ezimfishane okungaba yimibala efinyelela ku-26, njengokhilimu, omhlophe noma ompunga.
Ikati lase-oriental shorthair kuzoba yi- odlala naye ophelele wawo wonke amalungu omndeni. Mnike amathoyizi, futhi ukujabulele ukumbuka edlala.
Ikati lami keisha
Uhlobo Olujwayelekile lwaseYurophu uhlobo lwamakati asemgwaqweni, ngethemba lokuthi singabona ukuthi zinakekelwa kahle ezindaweni zokukhosela izilwane noma kumaProtectoras. Lawa makati abe nesikhathi esibi kakhulu kuwo wonke umlando, kwaze kwaba seqophelweni lokuthi ashushiswa futhi ashiswa ngenxa yokukholwa ukuthi ayengabadlulisi balesi sifo. Ngenhlanhla, izikhathi ziyashintsha futhi namuhla abantu abaningi ngokwengeziwe bahlala ekhaya elihle.
Uma sikhuluma ngemibala, kukhona okumnyama, i-tabby, i-orange, ... futhi-ke, mpunga. Zimaphakathi ngosayizi, zinesisindo esiphezulu esingu-6-7kg, nomzimba wezemidlalo futhi onamandla, konke kuhlanganiswe nomlingiswa odlala kakhulu futhi onothando. I-European Common kungaba kwezenhlalo kakhulu, inqobo nje uma isezenhlalo zisencane (izinyanga ezi-2-3). Ngaphezu kwalokho, akanazo izifo ezibucayi, ngaphezu kwalezo ezingaba nelinye ikati, njengemikhuhlane noma umkhuhlane.
Ngilibeke liphi igama?
Ngabe unesibindi sokuhlala nekati elimpunga? Uma kunjalo, ukumkhethela igama akuyona into elula, ngakho-ke ake sikusize. Lapha unayo eyodwa Uhlu lwamagama, kwabesilisa nabesifazane:
Amagama amakati ampunga
Kuze kube manje ikati lethu elikhethekile elimpunga. Ucabangani? Ziyizilwane ezibukekayo ezifuna into eyodwa kuphela: ukuzizwa zithandwa nokuthi ziyingxenye yomndeni ngempela. Ukuze, ngokubekezela nothando ngokuqinisekile uzolithola kwikati lakho elimpunga, umngane ongcono kunabo bonke. 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ikati elimpunga
Ngibe nephupho ezinyangeni ezimbalwa ezedlule lapho ngizibone nginekati elimpunga ku-upa .. umbuzo engiwuthathe ezinsukwini ezinhlanu ezedlule, izinyanga ezimbili nohhafu ubudala .. luthando olumsulwa oluyisimo sekati .. Ngangijabule.
Mabel rodriguez kusho
Iphupho lami bekulokhu nginekati elimpunga, kepha angikaze ngenze lutho ukulifuna, kulo nyaka, ekuqaleni, umngani washicilela isikhangiso lapho ahlinzeka khona amazinyane ezimpunga ama-3, kepha uvela komunye umuzi, ngokusho kwakhe zazisencane kakhulu futhi zazilinde ukulunyulwa, iqiniso ukuthi ngenkathi ngiyolanda ikati lami, wayesenalo igama lakhe, wayelinike abanye abantu, walahlekelwa yisikhathi, imali futhi ngaphezu kwakho konke wangibuyisela ngenhliziyo ephukile nezandla ezingenalutho.
Okumangazayo ukuthi ngemuva kwamasonto amabili othile wathola ikati elimpunga elilahliwe nomalokazana wami owayazi indaba yami babelana ngalokhu kushicilelwa, ekugcineni ngamenzela yonke into, intshontsho lalisedolobheni lami futhi kwakunzima nokulamukela, ngoba kwaqhamuka abanikazi futhi babefuna ukumhambisa epulazini bamshiye lapho ngoba babengeke babe naye.Ngichithe izinsuku ezintathu ezingxoxweni ngibakholisa ukuthi yimina engizoba noSimona, nokuthi angajabula kakhulu mina. Futhi iqiniso ukuthi le ntokazi manje isiyinkosazana, inokudla okunomsoco, uphahla, umbhede omuhle, imishanguzo yayo yokugoma, amavithamini ayo, ukuvakashela kwayo udokotela wezilwane namathoyizi amaningi.Sinezinyanga ezi-2 sindawonye futhi siyathanda ngabanye !!! kodwa qagela ukuthi: ……. Emasontweni amathathu edlule ngithole ukungezwani komzimba okungathi sína, obekungiphatha kabi kakhulu, futhi noma ngomuthi akususwa, futhi bangitshela ukuthi kufanele ngisuse ikati lami, futhi angazi ukuthi ngenzeni, angazi ngifuna, ngenze isibopho esiqinile naye, futhi kungisiza kakhulu ekucindezelekeni kwami ​​ngenxa yokushona kukamama.Ngaphandle kwalokho, bekuyiphupho lami njalo ukuba nekati elihle njengaye Ukwenza??? usizoaaaaaaaaaaa (sniffff, sniffff)
Phendula uMabel Rodriguez
Ungahlala ne ukungezwani namakati, kepha kufanele wenze izinguquko ezithile, njengokungamvumeli alale nawe ngokwesibonelo, noma ukugcoba kaningi.
Ungaya futhi esitolo sezinto ezifuywayo bese ucela imoto noma ukhilimu ukunciphisa i-dander emakati. ESpain kukhona eyodwa esebenza kahle kakhulu, ivela eBayer, futhi ibizwa ngeVetriderm.
Ana Rosa kusho
Sawubona, ngifunde indatshana emayelana nokungezwani komzimba nalezi zilwane ezisibangela zona, ngokusobala kungenxa yokuthi asijwayele ukuhlala nazo, kepha ngokuhamba kwesikhathi kuyindaba, uma isikhathi esiningi osichitha nayo uzokwazi ukuzivumelanisa naso, ngakho-ke ngiyakuqinisekisa ngoba ulwazi lwami lumi kanje: Angizange ngiwathande amakati noma izinja, ngathi awukwazi ukugcina lezi zilwane ezindlini, ngaphandle kokuthi angizithandi, izilwane zami ezifuywayo zazingu-2 morrocoy omncane kakhulu, kuze kube Ngelinye ilanga amagundane amancane aye efulethini, ngangazi ukuthi uMnu. umlondolozi unekati lapho esedlule, wangiboleka, ngaleso sikhathi ngalibuyisela kuye ngoba, njengoba ngishilo, angibathandi, kulokhu wangiboleka indodana ayeboleke yona, lapho ngiyoyibuyisela kuye wangitshela: Ngiyabona ukuthi uphila kahle nawe, ngaphezulu, usejwayele ukuhlala naye isikhashana isikhathi eside, ukuthi ezansi lapho kuyabahlupha abanye abantu abachitha isikhathi sabo bemenza okubi futhi bahlala beshayela ukunakwa kwami t ikati. Ngamtshela ukuthi kulungile, kepha bengingaqiniseki ngesinqumo esiphoqelelwe kodwa ngiyekile. Njengamanje lesosilwane esincane sesintshontshe ingxenye yenhliziyo yami futhi manje selilungu lomndeni wami. Haaa thatha i-loratadine ezinsukwini zokuqala, sekuvele kuyingxenye yempilo yami
Phendula u-Ana Rosa
U-Liz serrano kusho
Sawubona nginezinyane lekati elimpunga kodwa angihlukanisi uhlobo lwayo ... Izici zalo zifana kakhulu nezaseMpumalanga ezinezinwele ezimfishane kodwa uphelele grey
Phendula uLiz Serrano
Kungaba yi i-russian blue. Chofoza kusixhumanisi futhi uzobona ifayela lakho 🙂
Izintshisakalo ngamakati amnyama